Huawei: Sidey shirkadda sameysa taleefannada ee Shiineeska ku noqotay mid ka mid ah shirkadaha loogu hadalheynta badan yahay caalamka? - BBC News Somali
Image caption Shirkaddan Shiinaha ayaa ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn caalamka
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo qaran si uu hannaanka computerrada dalkiisa uga ilaaliyo shirkadaha ajaanibta ah ee uu loolanka kala dhaxeeyo, hasayeeshee hal shirkad un ayaa la rumaysan yahay in tallaabadan lagu bartilmaameedsanayo.
Huawei waxaa si weyn loogu yaqaan taleefannada gacanta ee ay sameyso - dhawaanna waxa ay kaalinta labaad ee shirkadaha ugu waa weyn caalamka ee taleefannada soo saara kala wareegtay shirkadda Apple - hasayeeshee shirkaddan weyn ee tiknolojiyadda ayaa sidoo kale waxa ay sameysaa qalab badan oo isgaarsiinta loo isticmaalo oo siyaabo dahsoon loo adeegsado.
Xitaa haddii shirkadda laga hor istaago inay qalabkeeda ku iibiso waddanka Mareykanka, dadka qaadaa dhiga howlaha warshadaha ayaa waxa ay qiyaasayaan inay u badan tahay in shirkaddu ay maamuli doonto 40-60% hannaanka taleefannada ee caalamka.
Haddaba maxay tahay sababta shirkaddan ay muran badan u dhalisay?
Eedo culus oo xiriir ah oo la sheegay in shirkaddu ay ku lug leedahay oo ay ka mid yihiin inay xiriir la leedahay hay'ado sirdoon oo caalami ah, hannaanka qalabka computer-ka ku shaqeeya oo sida gacmaha bini'aadamka loo sameeyay oo la xaday, qalab muddo dheer yaali kara oo aan isbadalayn iyo inay heshiisyo sir ah la gashay Iiraan ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu haysto.
Adeegga 5G: Aad buu u dheereeya balse aanan ammaan ahayn?
Huawei waxa ay wadahadallo kula jirtaa dalal caalamka ku yaal kuwaas oo ay doonayso inay gaarsiiso hannaanka muranka badan uu ka taagan yahay ee ku shaqeeya mobile-lada ee 5G.
Hannaanka ayaa noqon doona mid aad u degdeg badan waxayna u badan tahay in lagu isticmaali doono qalab badan oo cusub sida baabuur aanay cidina wadin.
Haddaba haddii Huawei ay udub dhexaad u tahay hannaanka Shiinaha ee 5G, ayaa dalalka ay Shiinaha is-hayaan waxa ay ku andacoonayaan in ay suuragal tahay inay daalacdaan farriimaha dunida la isku dhaafsanayo ee sii maraya hannaanka amaba in la damiyaba, arrintaas oo keeni karta isku dhexyaac baahsan.
Xitaa ka hor inta uusan soo bixin dikreetada madaxweyne Trump, Mareykanka ayaa sii qaaday tallaabooyin uu ku doonayo inuu cadaadis ku saaro xulafadiisa reer Galbeedka si loogaga weecdo shirkaddaasi Shiinaha.
Inta badan arrintaasi waxaa diiradda lagu saaray kooxda loogu yeero "Five Eyes" - ee ka kooban Mareykanka, UK, Canada, Australia iyo New Zealand - kuwaas oo hay'adahooda sirdoonku ay leeyihiin xiriir aad u dhaw, xog badan oo sirdoon iyo mid aad loo qariyo wadaaga, iyagoo badanaa isticmaalaya habka computerrada iyo isgaarsiinta.
Mareykanka ayaa ku goodiyay inuu joojin doono inuu xog la wadaago dalalka xubnaha ka ah kooxdaas ee ku hadla af Ingiriisiga kuwaas oo rakibta qalabka Huawei ee 5G.
"Haddii dal uu arrintaas qaato oo uu isticmaalo qaar ka mid ah xogta muhiimka ah haddaba waxaanan noo suuragalayn inaan xog la wadaagno," ayuu ka digay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo.
Huawei ayaa si joogta ah waxa ay u diidday inay weligeed la shaqeysay hay'adda sirdoonka ee dowladda Shiinaha, hasayeeshee dadka shirkadda dhaleeceeya ayaa sheegaya in shuruucda Shiinaha aanay u suuragalinayn in shirkaduhu ay diidaan inay gacan ka gaystaan uruurinta xogta sirdoonka.
Mareykanka ayaa ka cabsanaya in shirkaddu ay xog ka raadiso taas oo qeyb ka ah hab dhaqankeeda.
Edward Snowden oo horay ula shaqeyn jiray hay'adda NSA ayaa sheegay in sanado badan ay hay'adaha sirdoonka Mareykanka jabsanayeen xog la xiriirta shirkadaha waa weyn ee tiknolojiyadda ee Mareykanka - oo ay ka mid yihiin Google iyo Yahoo - iyagoo iskudaya inay hoos u dhigaan hannaanka ay xogta ku ilaaliyaan.
Haddaba waa ay iska fududaha in la arko sababta ay dowlad uga shakisan tahay shirkad xarunteeda dhexe ay ku taal dal uu xifaaltan kala dhaxeeyo
Haddaba haddii dhibaatooyinka la sheegayo inuu wato barnaamijkan aadka u xoogga badan uu yahay mid aan dhameystirnayn, ayaa haddana mid ka mid ah fadeexadaha Huawei lagu eedaynayo waxaa ka mid ah in mid ka mid ah injineeradooda uu xadan qalabka computer-ka ku shaqeeya oo sida gacmaha bini'aadamka u sameysan.
Fadeexadda ayaa soo ifbixisay kaddib markii ay soo baxeen email-lo cusub, iyadoo shaki laga muujiyay sheegashada injineerka ee aheyd inuu kaligiis un arrintaas ku lug lahaa, waxaana laga yaabaa baa la leeyahay inuu amarka ka qaadanayay madax sarsare oo Shiinaha ku sugan.
Tani waa mid ka mid ah sababa sanadkii hore Canada loogu xiray madaxa dhaqaalaha ee Huawei, taas oo uu Mareykanku doonayo in loo soo dhoofiyo.
Inay shirkadda si hoose ula shaqeyso Iiraan?
Ms Meng ayaa weli iska difaacaysa in loo dhoofiyo Mareykanka eedahaas awadeed - kuwaas oo ay diiddan tahay - iyo eedo kale oo la xiriira xiriirka ay Huawei la leedahay Iiraan.
Image caption Mareykanka ayaa sii adkaynayay cunaqabateyn uu ku soo rogay waxyaabaha ay Iiraan dhoofiso oo uu shidaalku ku jiro
Waxyaabaha lagu soo eedeeyay Ms Meng ayaa waxaa ka mid ah inay bangiyo iyo dowladda Mareykanka been uga sheegtay ganacsiyada ay Iiraan kula jiraan.
Ms Meng oo uu dhalay ninka sameeyay shirkadda iskana fogaysay dhammaan eedahaasi ayaa waxa ay wajahaysaa 30 sanadood oo xarig ah waa haddii loo dhoofiyo Mareykanka oo la xukumo.
Hasayeeshee dhibka Huawei ku haysta Mareykanka halkaas kuma uusan dhammaan.
Image caption Shaashad adag ayaa ah waxa ay ku haminayso shirkadkasta oo mobile sameysa
Sida ay sheegayso warbaahinta Bloomberg, FBI-da ayaa waxa ay shirkaddan weyn ee tiknolojiyadda ka baaraysaa inay jabisay sharciga caalamiga ah ee lagu hago hubka, taas oo ku aaddan qaabka ay u sameeyeen dhalada ay adag tahay inay jabot.
Haddii uu taleefan kaa dhaco waad garankartaa sida ay u fududahay in shaashadda ay isla markiiba burburto halka ay aad u badan tahay kharashka lagu hagaajinayo.
Taleefannadan casriga ah haddii aanay shaashadooda jabaynna taasi waxa ay fursad weyn u tahay shirkadda tiknolojiyadda ee farsamadaas keensata.
Image caption Huawei ayaa waxaa loo soo bandhigaa inay saxiixdo "heshiisyo ah in aanay jaajuusin" dowladaha ajaanibta ah